Methyltrienolone poda (965-93-5) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Methyltrienolone powder ndechimwe chezvinhu zvakanakisisa zve steroid yemusimba inoputika. Methly trenbolone inobata mishonga inowedzera michina. Metribolone imwe yesimbi yakasimba pane vanabolic steroid yakambobudiswa.
Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Tsanangudzo
Raw Methyltrienolone powder ndeyomumuromo inonzi anabolic-androgen steroid iyo inonzi 17--alkylated nandrolone (19-nortestosterone) inogadzirwa. Haitengeswi semishonga yemishonga uye chikwata chekudya nemhaka yehutano hwakanyanya uyerorosiki uye chiropa chechivi. Kunyange zvakadaro, inowanzoshandiswa semashoko ekutaurira kwehupenyu hwehutachiona hwezvehupenyu hwehupenyu. Iyo inogona kusunga zvakasimba ku-androgen receptor uye inogona kushandiswa sehukama hwehutano hwehandiro re androgen mu prostate uye mumatumbu eprostatic.
Zvidzidzo zvakaratidza kuti kutora chirongwa chinonzi anabolic steroid nechikafu kunogona kuderedza kushandiswa kwayo. Izvi zvinokonzerwa nemafuta anokonzerwa nemafuta e-steroid hormone, izvo zvinogona kubvumira zvimwe zvechirwere kuti zviputswe nemafuta asingaverengeki asina kuwanda, zvichideredza kushandiswa kwaro kubva pamatumbo emimba. Nokuda kwekushandisa zvakanyanya, Raw Methyltrienolone powder inofanira kutorwa pachirwere chisina chinhu.
Kemikari Name METRIBOLONE; Methyltrienone; 17A-METHYL-TRENBOLONE; Metribolone; Methyltrenbolone (Metribolone)
muchiso Name Raw Methyltrienolone powder
Kirasi yeMishonga Steroids; Intermediates & Fine Chemicals; Pharmaceuticals; trenbolone series
Molecular Wsere 284.39
Kunyorera Point 170 °
Kubikira Point 485.9 ± 45.0 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life 4-6 maawa
ruvara chiedza chine jena
Skukodzera DMSO: ≥10mg / mL
Raw Methyltrienolone powder APane yakashandiswa seyiyo inotsanangurwa ye in vitro chiitiko chekuongorora zvinyorwa zvehupenyu. Iyo inogona kusunga zvakasimba kune androgen receptor uye inogona kushandiswa sehukama hwehutano hwehandiro re androgen mu prostate uye mumatumbu eprostatic.
Chii chinonzi Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)?
Methyltrienolone imwe yesimbi yakasimba pane vanabolic steroid yakambobudiswa. Uyu mushandi ndiye chibereko che trenbolone (trienolone), iyo yave iine c-17 alpha alkylated kuti ishandise kutaura kwemuromo. Iko kushandurwa kwakagadzira steroid inonyanya kusimba kupfuura mukoma wayo asina-methylated. Kubwinya kwaro kwave kuyerwa kuva chero ipi zvayo kubva kune 120-300 nguva huru kupfuura iyo ye methyltestosterone, nekuparadzanisa kukuru pakati pevanabolic uye androgenic madhara.535 536 Milligram ye milligram methyltrienolone inoshandisa steroid yakawanda kupinda chero mutengi akatengeswa pamusika wekutengeserana, unoda doses zvishoma nezvishoma .5-1 milligram pazuva kuti aone simba rakasimba revanabolic. Kubwinya kwaro kunongobatanidzwa nehuwandu hwehutu hwehutu, zvisinei, iyo yakagadzirisa kushandiswa kwayo kwemazuva ano kune iyo yeongororo yekuongorora chete.
Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) inoshanda
Methyltrienolone, mushure mekugadziriswa nemudumbu acids kusvika kune androgen receptors uye zvakasungwa zvakasimba navo. Androgens inowanzobatana nehutachiona hwemadhemoni inokonzera kubereka vanabolic madhara. Cherechedza pano kuti chinhu chikuru chinobatsira ma hormone anoita izvi anabolic zvinokonzerwa neye androgen receptors. Dzinokurudzira maitiro akasiyana-siyana anotungamirira kuwedzera mumusimba masimba uye simba.
Testosterone (imwe ye many androgens) ndiyo hormone inokosha inokonzera kukura mumuviri wako nekugadzirisa. Androgen receptors vanovimbisa kuti muviri unopindura zvakakodzera iyo hormone yakavanzwa. Testosterone inosunga nemapapiro aya uye inosvika mumasero emasese masero ayo inotamba basa rayo.
Methyltrienolone, nekusunga zvakasimba ne-androgen receptors, inobatsira kugadzirisa migumisiro ye testosterone, nokudaro zvichiita kuti zviwanikwe muhutatu masimba nesimba.
Nyanzvi dzinokurudzira kuti utore doses rezasi yeyi anabolic steroid. Urongwa hunobudirira hunofungidzirwa kuva pakati pe0.5mg kusvika 2mg. Chirwere ichi chinofanira kugoverwa mu 3-4 zvikamu pamwe nehana imwe inotorwa pamusoro peawa 1.5 isati yashanda. Sezvambotaurwa kare, methyltrienolone imishonga yakasimba uye kudzvinyirirwa pairi inogona kukanganisa kukanganisa kwoutano hwako. Nokudaro, chengetedza maitiro ako pasi uye maitiro ako mashoma. Nguva yakatarwa ye methyltrienolone cycle ndevhiki ye6-8. Zvisinei, kune vanotanga, inorayirwa kuchengetedza nguva yekufamba kwenguva shoma kureva mavhiki e4 kana kunyange zvishoma.
Kutsvakurudza kunoratidza kuti kutora methyltrienolone nechikafu kunogona kuderedza bioavailability ie inogona kuderedza kushandiswa kwemakemikari mumuviri wako. Izvo zvinodyiwa zvinodyiwa mafuta zvichibva pakaderedzwa bioavailability zvingadaro zvinodzivisa vanabolic zvinokonzerwa ne steroid iyi. Saka, kuti tibatsirwe zvakakwana, tinokurudzira kuti uitore pane zvisina chinhu mudumbu.
Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Mashandiro
Methyltrienolone imwe yemasimba anebolic steroid yakasimba ine zvakawanda zvinobatsira. Heino mhando yezvikomborero zvikuru zvauchawana paunenge uchienda nebhaibheri nemudhaka uyu:
(1) Hazviiti kuti aromatize. Izvi zvinoreva kuti haina kutendeukira kune estrogen. Cherechedza pano kuti estrogen ndiyo hormone inokura mazamu, uye inodzora kumwedzi uye kubereka mumadzimai. Saka mahomoni anoshandura mu estrogen angakutungamirira kune gynecomastia, kureva mazamu akawedzerwa mune varume. Uyezve, marefu eesrogen mazinga mumuviri anogona kukonzera zvirwere zvemoyo uye kenza yeprotate. Asi iwe haufaniri kunetseka nokuti kana uchifambisa bhasikoro nemudhaka uyu iwe wakachengeteka kubva kune izvi zvose sezvo hazvizoshanduri ku estrogen.
(2) Sezvo isingashanduki ku estrogen, inochengetedza muviri wemuviri kuchengeteka kubva pakachengetwa kwemvura nekubvisa mvura isingadiwi kubva mumuviri. Saka, iwe unogona kuishandisa panguva yekudya kana uchigadzirira makwikwi.
(3) Iyo inonyanya kuwedzera kuoma kwemisumbu. Ichi chinhu chisingaiti dzose vanabolic steroid inokwanisa kuita. Steroid dzakawanda dzinoratidza kukura kwakanyanya mumatomu kunowanikwa asi vashomanana chaizvo vanotungamirira kumatambudziko ekunyanya pamwe chete nawo. Methyltrienolone ihwo steroid imwe inobatsira musimba kuoma kukupa muviri wako kutarisa kutarisa kwakasimba.
(4) Uchaona kuwedzerwa kukuru kwemasimba paunenge uchienda nebhaibheri ne steroid iyi. Ichakubatsira iwe panguva dzekushanda kwako nekuwedzera simba rako nesimba. Nokudaro iwe uchakwanisa kudzidzisa kwenguva refu uye kakawanda.
(5) Inowedzera vascularity. Kuva mutambi kana mutumbi wemiti, iwe unogona kunge uchida mhedziso yakakurumbira, inooneka kwazvo kuti ipe mitsipa yako tsanangudzo yakawanda.
(6) Izvo zvine simba zvikuru uye inogona kufananidzwa nematanda e2 kusvika ku3 yakasimba steroid oral inenge yakavharidzirwa panguva imwe chete. Nokudaro, kunyange kushandiswa kwayo muzvikamu zvishoma zvinotungamirira kukuwedzera kukuru mumasimba masimba uye simba.
Tenga Methyltrienolone powder kubva kuBuasas.com
1 Kudzokorora nokuti Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)
arun - April 22, 2019 :
Chigadzirwa METHYLTRIENOLONE chinobatsira chaizvo.